Saturday August 29, 2020 - 12:35:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
biya xireenka Al Nahda ee dalka Itoobiya
Majaladda Foreign policy oo soo xiganaysa mas'uuliyiin American ah ayaa sheegtay in Mareykanku uu hakiyay dhaqaalihii uu bil walba dowladda Itoobiya kusiin jiray arrimaha ladagaallanka 'Argagaxisada' tababarka ciidamada iyo ladagaallanka ka ganacsiga dadweynaha.
Mike Pompeo oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ogolaaday in lajoojiyay lacag gaaraysay 130 malyan oo dollar oo Itoobiya bil walba lagusiin jiray arrimaha ladagaallanka waxa Argagaxisada loogu yeero iyo tababarka ciidamada.
Tani kama dhignay in Itoobiya ay wayn doonto dhammaan dhaqaalihii ugu imaan jiray Mareykanka balse waxaa la sheegayaa in hoos loo dhigay sababa laxariiro madax adeyga ay ka muujinayso wadahadallada la xiriira biya xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil.
Itoobiya ayaa 18-kii sanadood ee lasoo dhaafay reergalbeedka gaar ahaan Mareykanka uqaabilsaneed ladagaallanka muslimiinta geeska qaaradda Afrika.
Tallaabadan dhaqaalaha looga joojiyay xukuumadda Addis Ababa ayaa kusoo aadaysa xilli fatqalado siyaasadeed iyo kuwa amni uu wajahayo R/wasaare Abiy Axmed.